Researchers achọpụta ọhụrụ ehi ọrịa na gbochie ya si na-agbasa - China Chongqing Fangtong
Researchers achọpụta ọhụrụ ehi ọrịa na gbochie ya si na-agbasa
Ịgbaso mkpụrụ ndụ ihe nketa ọmụmụ nke nkwarụ ehi, nnyocha bụ-enwe ike ịchọpụta a na mbụ na-amaghị ama ọrịa n'etiti Holstein ehi. Ozuzu ehi site na nke mutation ma si otú ahụ deformation sitere ugbu a tinyere ala igbochi ọrịa si na-agbasa n'ihu.
N'ime Danish ehi ozuzu na semen nke onye ozuzu ehi a na-eji inseminate a ọtụtụ ehi. N'ihi na ọtụtụ inseminations otu oké ehi nwere ike otú nna puku ehi. Ya mere, ọ dị oké mkpa iji chọpụta ma ozuzu ehi ibu butere n'aka ọrịa.
Nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme nnyocha na Mahadum nke Copenhagen dị nnọọ mere. Na a na-amụ n'etiti Holstein ehi bipụtara na nkà mmụta sayensị na magazin BMC Jenetik ha chọpụtara a siburu undescribed ọrịa n'etiti ụmụ anụmanụ - a ọdịdị ihu deformation ha họọrọ ka a kpọọ Ihu Dysplasia ọrịa. The na-eme nnyocha achọpụtala na mkpụrụ ndụ ihe nketa mutation na na-akpata ọrịa n'etiti ụmụ ehi ma na deere ya azụ otu ozuzu ehi. The ehi ugbu a tinyere ala iji gbochie ikpe nke ọrịa n'etiti ọhụrụ-mụrụ ehi.
'Anyị chọpụtara na otu ozuzu ehi malitere a mutation na mkpụrụ ndụ nke semen-amị anụ ahụ, nke mere ka ndị deformation n'etiti umu-ehi. The ehi gafere mutation na na 0,5 pasent nke mkpụrụ ya, nke na-adịghị ada dị ka ukwuu. Ma nke a ehi ama mua karịa 2,000 ụmụ ehi ma na ike nwere ike na-na nna ọbụna karị. All na oruru ehi nwụrụ ma ọ bụ ka e bibie n'ihi na ha na-ata ahụhụ. Ya mere, ọ dị mkpa na-achọpụta ihe na-akpata ', ka Prọfesọ Jørgen Agerholm si Department of Veterinary Clinical Sciences.
Mgbe ha natara ozi site na anụmanụ na nke umu-ehi na ọdịdị ihu deformations, Jørgen Agerholm wee na-achọ ihe ikpe ya netwọk nke anu-ulo-anụmanụ, gụnyere on Facebook. O natara ọzọ ehi maka nnyocha.
DNA si oruru ehi e doro ihe e mkpụrụ ndụ ihe nketa ọmụmụ, na ebe a na-eme nnyocha kwuru na n'ozuzu nke genome nke ẹdude a mutation ahụghị na nkịtị Holstein DNA. Nke a ga-ekwe omume n'ihi na ọma gara aga mappings nke nkịtị Holstein DNA.
The na-eme nnyocha mgbe mụtara na yiri ihu deformations na-hụrụ ya n'etiti ụmụ mmadụ, na ndị a na-kpatara mmụba na otu akụkụ nke genome, ihe kpọmkwem na FGFR2 site n'usoro n'etiti ọhụrụ-mụrụ ụmụ ọhụrụ. Nke a site n'usoro e sequenced na umu-ehi 'genome, na-eme nnyocha nwee ike mgbe ahụ chọpụta na a mutation na a site n'usoro mere ka ndị ọrịa n'etiti umu-ehi. The ụmụ mmadụ ọrịa otú a nyere ndị na-eme nnyocha na usoro nke ịmata ihe na-site n'usoro mutation.
The na-eme nnyocha na-enyocha DNA si ehi 'mụrụ ya ma ụmụnne na mụtara na mutation nwekwara adịkwaghị ebe a. Nke a pụtara na umu-ehi mepụtara deformation mgbe mutation e bufeere si ma nne ma ọ bụ nna na-adịghị si ma nne na nna, nke bụ ikpe na ọtụtụ butere n'aka ọrịa.
'Ebumnobi anyị mgbe niile Lower ọnụ ọgụgụ nke na-arịa ọrịa na ndị nwụrụ anwụ ehi, dị ka ụfọdụ butere n'aka ọrịa na-ata na-egbu mgbu na invalidating. Na nke a na anya eyịride si ndi-isi nke umu-ehi, na ọdịdị ihu deformations mee ka ha na-enwe oké nsogbu iku ume. Ọ bụghị siri ike iche n'echiche na ihe mgbu nke a mere. Research ihe dị ka ndị a ga-imubanye na anụmanụ ọdịmma site na ịmachi mgbasa nke ọrịa ndị dị. Na N'ezie ọ na-mma na ọnọdụ ego nke anu-ulo-nwe, bụ ndị nwere ike na-ebelata weere ', kwuru, Jørgen Agerholm, onye bụkwa Isi nke Nkebi maka Veterinary amụba na Obstetrics.